Mọnde, Febụwarị 19, 2018 Sọnde, Febụwarị 18, 2018 Douglas Karr
Vydia bụ ụlọ ọrụ teknụzụ vidiyo Inc nke Inc 500 nke na-enye ndị okike ikike ijikwa ọdịnaya ha na ikike dijitalụ n'ụzọ dị mfe site na otu ikpo okwu etiti etiti. Ndị na-emepụta ọdịnaya na-enye ike nke vidiyo n'ofe usoro mmekọrịta ọ bụla dị, agbanyeghị, nghọta ha na njikwa ha nwere ọgụgụ isi. Vydia na-enye ndị okike ike site na iji akọ, ngwa zuru ụwa ọnụ jiri nsogbu a dozie nsogbu a. Roy LaManna, Onye guzobere na onye isi nke Vydia Vydia's Agency Gụnyere ikike iji:
Ahịa Ọgbọ: ingghọta Otu Ọgbọ Dị Iche Iche na Mmasị Ha
Tọzdee, Disemba 26, 2017 Tọzdee, Disemba 26, 2017 Donna Moores
Ndị na-ere ahịa na-achọkarị ụzọ na usoro ọhụụ iji ruo ndị na-ege ha ntị ma nweta nsonaazụ kacha mma site na mkpọsa ahịa. Marketingzụ ahịa ọgbọ bụ otu atụmatụ dị otú ahụ nke na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịbanye n'ime miri emi n'ime ndị na-ege ntị ezubere iche ma ghọta mkpa na mmasị dijitalụ nke ahịa ha. Kedu ihe ahịa nke ọgbọ? Ahịa nke ọgbọ bụ usoro nke kewara ndị na-ege ntị na ngalaba dabere na afọ ha. Na ụwa ahịa, ndị
Ihe kpatara ọdịnaya Onye ji Eme Ihe Onye Ọchịchị Na-achị Kasị Elu Na Oge nke Social Media
Sọnde, Febụwarị 5, 2017 Sọnde, Febụwarị 5, 2017 Corey oge ntoju
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ etu teknụzụ siri wee dịrị n’oge dị mkpirikpi. Ogologo oge gara aga bụ ụbọchị Napster, MySpace, na ntinye AOL na-achịkwa ahịa n'ịntanetị. Taa, usoro ntanetị mgbasa ozi na-achị kachasị elu na mbara igwe dijitalụ. Site na Facebook ruo Instagram ruo Pinterest, ndị na-elekọta mmadụ a aghọwo ihe dị mkpa nke ndụ anyị kwa ụbọchị. Elela anya karịa oge ole anyị na-etinye na mgbasa ozi mmekọrịta kwa ụbọchị. Dị ka Stastista si kwuo,
ROBO: Otu ndị ahịa azụ ahịa taa si eme n ’ọnlaịnụ na zụta ihe n’ịntanetị
Tọzdee, Machị 24, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na anyị na-aga n'ihu na-eme nnukwu ihe site na uto nke ahịa n'ịntanetị, ọ dị mkpa icheta na 90% nke ịzụrụ ndị ahịa ka na-eme na ntaneti mkpọsa. Nke ahụ apụtaghị na ịntanetị enweghị mmetụta dị ukwuu - ọ nwere. Ndị na-eri ihe ka chọrọ afọ ojuju nke ile anya, imetụ aka na ịnyagharị ngwaahịa tupu ị kwụọ ụgwọ maka ya. ROBO abụghị ihe ọhụrụ, mana ọ na-abụ ụkpụrụ na njem ịzụ ahịa ndị ahịa yana